'अष्ट्रेलियन पीआर लिएका श्रीमानसँग डिभोर्स हुँदा मेरो पीआर प्रक्रियामा के असर पर्छ ?'
म अष्ट्रेलिया आएको ६ महिना भयो । मसँग सबक्लास ३०९ भिषा छ । मेरो श्रीमानले अष्ट्रेलियाको नागरिकता लिएका छन् । पछिल्लो समयमा आएर मेरो र श्रीमानको सम्बन्ध राम्रो छैन । मलाई मानसिक पीडा मात्र होइन, कहिलेकाही उनले पिट्ने समेत गर्छन् । म नेपाल फर्कन चाहन्नँ तर उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छु । यसो गर्दा मेरो पीआरमा के फरक पर्छ?
तपाईं घरायसी हिंसा -home violence- को शिकार हुनुभएको जस्तो देखिन्छ ।
अष्ट्रेलियाको माइग्रेशन प्रणालीमा घरायसी हिंसासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ, जसअन्तर्गत पीआरको लागि आवेदन दिएको व्यक्ति घरेलु हिंसाबाट पीडित भएमा र त्यसको कारण सम्बन्ध टुटेमा पनि निजको पीआरको आवेदनले निरन्तरता पाउँछ ।
यस सन्दर्भमा तपाईंलाई माइग्रेशनसम्बन्धी परामर्श दिने वकील वा माइग्रेशन एजेन्टले उचित परामर्श र सहयोग गर्नसक्छन् ।
बोरिस जोनसन कञ्जरभेटिभ पार्टीको नयाँ नेता, बुधबार प्रधानमन्त्री बन्दै
कञ्जरभेटिभको नेता निर्वाचित जोनसनले बुधबारदेखि नै बेलायतको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।